किन बढ्दै छ अमेरिकामा नेपाली सहित एसियाली नागरिकको ह#त्या​ शृंखला ? यस्तो छ कारण ।। - Like For Nepal
किन बढ्दै छ अमेरिकामा नेपाली सहित एसियाली नागरिकको ह#त्या​ शृंखला ? यस्तो छ कारण ।।
काठमाडौँ। रवीना, देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो विकिनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै विकिनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले ठूलै चर्च पायो
उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि अभिनेता हुन् । अभिनेत्री कार्की र आयुष्मान प्रेम सम्बन्धमा रहेका गसिपहरु पनि मिडियामा छाइरहन्छन् ।सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश साभार गरेका छौ , महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ?
मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँले एउटा ग्यादरिङमा हजुरवा, हजुरवाका तीनजना श्रीमती र छोराछोरी सबै जम्मा भएको भन्नुभयो । ल त्यहि ठाउँमा हजुरआमाका तीनजना श्रीमान जम्मा भएको भनौं त ?
एउटा पुरुषका तीन श्रीमती एकै ठाउँ भेला हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिने समाजले एउटी महिलाका तीन श्रीमान एकैठाउँ ग्यादरिङ गरेको पचाउन सक्छ । पुरुषहरु खुला रक्सी, चुरोट खान्छन् । ल हामी खाउँ त, के भन्छ समाज ?
Prevexclusive:अन्तत जनही पचहत्तर हजार धरौटिमा छुटे कोरियन लाउरेको परिबार ! छुटेपछि मन्जुको प्रतिक्रिया
Nextपोखरामा महीलाले बनाइन रुखमा घर, चलाउछीन यस्तो रेस्टुरेन्ट ! अचम्मै लाग्ने रुखमा यस्तो कसरी भयो
एमसीसी फेल गराउन हात धोएरै लाग्यो चीन, नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी
युवकले प्रेमिकाकी आमालाई किड्नी दान गरे, महिना नबित्दै प्रेमिका अर्कै केटासँग टाप
४ लाख बोकेकी फाइनान्सकी महिला कर्मचारी ४ महिनादेखि वेपत्ता
डोजरले हु त्या एको ढुंगाले गुडिरहेको बोलेरोलाई किच्यो, तीन जनाको घटनास्थलमै मृ त्यु